साम्राज्ञी-भुवन विवाद : समर्थन र विरोधमा तातियाे सामाजिक सञ्‍जाल
काठमाडौं। अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाह र निर्माता भुवन केसीबीचको विवादले चर्चा पाएको छ। सामाजिक सञ्‍जालमार्फत् सार्वजनिक भएको विवाद अहिले सर्वत्र चर्चाकाे विषय बनेको हो। यो विषयमा दुवै जनाले सञ्चारमाध्यम प्रयोग नगर्ने जनाएका छन्।
आफ्नो चलचित्र यात्राको पाँच वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा साम्राज्ञीले १२ असारमा इन्स्टाग्राममार्फत एक भिडिओ सार्वजनिक गरिन्। जसमा उनले ८ वटा चलचित्रमा अभिनय गर्ने क्रममा धेरै पटक शोषणको शिकार बनेकी बताएकी छन्। नाम नलिए पनि उनको आरोप ड्रिम चलचित्रका निर्माता भुवन केसीप्रति थियो। पटक-पटक शोषणको शिकार बनेपछि आफ्नो पीडा बाहिर ल्याएको बताएकी साम्राज्ञीलाई भुवनले सामाजिक सञ्‍जालमार्फत नै जवाफ दिए। निकै कटाक्षशैलीमा उनले 'जुन थालमा खाने त्यही थालमा दूलो पार्ने' भन्दै जवाफ दिए।
"छोरी अब यस्तो नगर है भन्दै गालामा मुख जोड्याएरै भनिराख्नुभएको थियो। तै पनि म सुनिरहेँ। उहाँलाई ‘अंकल’ भन्दा मन पर्दैन। त्यसैले मैले उहाँलाई ‘हुन्छ दाई’ भन्दै धकेलेँ।"
यही कुराले तातेको सामाजिक सञ्‍जालमा साम्राज्ञीले अर्को भिडियाे बनाइन्। उनले जापान अवार्डमा आफूमाथि नराम्रो व्यवहार गरेको आरोप लगाइन्। अवार्डमा अभिनेता केसीले भनेको कुरा सम्झँदै उनले भिडियाेमा भनेकी छन्, "तँ त मेरो प्रोडक्ट हो। अब पुरानो कुरा कोट्याएर के फाइदा, तँ एउटा ठाउँमा पुगिसकिस्, यस्तो कुरा नगर भनेर मलाई सम्झाउनुभयो। त्यतिबेला मलाई भित्रैदेखि घिन लागिरहेको थियो। तै पनि हाँसेर बोलेँ।"
ती कुरा भनिरहँदा भुवन केसीले आफूमाथि 'ह्यारेस्मेन्ट' गरेको आशय व्यक्त गर्दै साम्राज्ञीले थपेकी छन्, "ती कुराहरू अलि टाढाबाट पनि भन्न सकिन्छ नि! गाला जोड्याएर, टाँस्सिएरै भन्नुपर्छ र? छोरी अब यस्तो नगर है भन्दै गालामा मुख जोड्याएरै भनिराख्नुभएको थियो। तै पनि म सुनिरहेँ। उहाँलाई ‘अंकल’ भन्दा मन पर्दैन। त्यसैले मैले उहाँलाई ‘हुन्छ दाई’ भन्दै धकेलेँ।"
साम्राज्ञीलाई भुवन केसीको कटाक्षः 'जुन थालमा खाने, त्यही थालमा दुलो पार्ने'
चलचित्र उद्योगमा हुने गरेको शोषण सार्वजनिक गरेकी साम्राज्ञीले यस विषयमा भने मिडियामा नबोल्ने बताएकी छन्। युट्युबलाई सञ्चारमाध्यमको संज्ञा दिँदै साम्राज्ञीले आफ्नो पीडा इन्स्टाग्रामार्फत् नै सार्वजनिक गर्ने बताएकी हुन्।
उता भुवनले पनि यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्‍जालमा समर्थनदेखि ट्रोलसम्म
शोषणको विषय सार्वजिनक भएसँगै सामाजिक सञ्‍जालमा यो विषय चर्चा पाएको छ। साम्राज्ञीको समर्थन गर्नेदेखि लिएर ट्रोल बनाउनेसम्म देखिएका छन्। विशेषगरी अभिनेत्रीहरूले साम्राज्ञीको कुरामा समर्थन जनाएका छन्। नायिका नम्रता सापकोटाले 'सत्य कुरा लुक्दैन' भन्दै साम्राज्ञीको समर्थन गरेकी छन्।
त्यस्तै नायिका वर्षा सिवाकोटीले पनि उनको समर्थन गर्दै अब गलतविरूद्ध बोल्नुपर्ने बताएकी छन्।
साम्राज्ञीको पाँच वर्षे चलचित्र यात्रा, भन्छिन्- धेरै पटक शोषणको शिकार बनेँ
भुवनको स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरूले भने साम्रज्ञीलाई ट्रोल बनाएका छन्। केही समय अगाडि संसारभर 'मी टू' अभियान चलेको थियो। कार्यस्थलमा यौनशोषणमा परेकाहरूले उक्त अभियान सञ्चालन गरेका थिए। बलिउडमा भने यसले चर्चा पाएको थियो। नेपालमा भने केहीले मी टूमा परेको बताए पनि त्यसको खासै प्रभाव देखिएको थिएन।
साम्राज्ञीले लगाएको शोषणको आरोप अन्य चलचित्रकर्मीहरूले पनि समर्थन जनाउँदै कानुनी कारबाहीलाई पनि अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन्।
प्रकाशित: मंगलबार, असार १६, २०७७ १६:५२
छायांकनको क्रममा शोषण हुने गरेको साम्राज्ञीको आराेप
आफ्नो धरातल नबिर्सिन भुवन केसीको सुझाव
आफूमाथि हुने गरेको शोषणविरूद्ध सबैले बोल्नुपर्ने आवाज